China DIY CNC စက်စက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံ anebons
DIY CNC ကြိတ်စင်လူမီနီယံ
Precision CNN Turning Shaft
တိုက်တေနီယမ် CNC စက်
စိတ်ကြိုက်လူမီနီယံ Anodized စိန့် ...
CNC အလူမီနီယမ်အလွိုင်း Mechani ...
တိကျစွာတိကျသောစာရွက် Meta ...
ကြေးဝါ Connector စက် CNC
Die Casting ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းများ
Anodized အပြာရောင်အစိတ်အပိုင်းများကို Milling
ကြေးဝါပုံနှိပ်ခြင်းစားသုံးသူ Goo ...
Peek အစိတ်အပိုင်းများ Turning CNC
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနေအထားကိုအရှိန်မြှင့်ရန်နှင့်စိတ်ကြိုက် 3/4/5 Aixs Cnc စက်ယန္တရားအပိုပစ္စည်းများကိုအလျင်အမြန်ဖြန့်ဖြူးရန်ကျွန်ုပ်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမည်။ CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း anodized လူမီနီယံအစိတ်အပိုင်းများကိုလျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်တည်ချက်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်နှင့်လျင်မြန်စွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားပါမည်။ စိတ်ကြိုက် 3/4/5 Aixs Cnc စက်ယန္တရားစက်ပစ္စည်းအပိုပစ္စည်းများ။ CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း anodized လူမီနီယံအစိတ်အပိုင်းများကိုလျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံ။
၁။ စီအင်စီကွန်ပြူတာစီဒီ၏အစိတ်အပိုင်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုရရှိရန်ပရိုဂရမ်မှသတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းစီအင်န်စီအက်စစ်စက်မှတစ်ဆင့်ထုတ်ကုန်၏ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများပေါ် မူတည်၍ စက်ကြိတ်သည်။
၂။ အစိတ်အပိုင်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နမူနာပုံသဏ္theာန်သည်ထောင့်အချို့နှင့်အပိုအစိတ်အပိုင်းများရှိလိမ့်မည်။ ၀ န်ထမ်းများသဲသောင်ပြင်ကိုချောချောမွေ့မွေ့ပြုလုပ်ရန်သွင်ပြင်ချောချောမွေ့မွေ့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၃။ လေဆာထွင်းထုခြင်းသည်နမူနာပုံသဏ္ofာန်၏သုတ်ဆေးကိုဖယ်ရှားရန်လေဆာနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ နမူနာ၏အစိတ်အပိုင်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။
၄။ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပြုခြင်းသည် anodizing ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် electrolysis ၏လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ကုသမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်သောဓာတ်တိုးခြင်း၏ချေးခြင်းအားခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့်၎င်းကိုလုပ်ငန်းခွင်တွင်ခဲသည်။
5. ပုံဆွဲ, ဒါဟာအစိတ်အပိုင်းများ၏အသွင်အပြင်အပေါ်ဒဏ်ငွေအမှတ်အသားများ၏အချွတ်ဆွဲထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုနမူနာပိုကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။
Anebon တွင် Vertical Mills မှ Hi-Speed ​​Fanuc Robodrill စက်များနှင့် ၅- Axis Machining စင်တာများအထိတင်သွင်းထားသော CNC စက်စက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ Anebon သည်နောက်ဆုံးပေါ် CAD / CAM နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Master CAM ဆော့ဝဲလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား 2D / 3D မော်ဒယ်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်အောင်ပြုလုပ်သည်။
တိကျသော CNC စက်များ တိကျသောစက်ကိရိယာ လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံလုပ်ငန်းစဉ်
တိကျသောထုတ်လုပ်မှု တိကျသောစက်အစိတ်အပိုင်း လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်လုပ်မှု
တိကျသောကြိတ်ခွဲခြင်း တိကျသောစက်အစိတ်အပိုင်းများ လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံဟာ့ဒ်ဝဲ
ရှေ့သို့ CNC လူမီနီယမ်ကြိတ်ခွဲ
နောက်တစ်ခု: CNC စက် OEM ဝန်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် CNC စက်၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်းကို ၁၂ နှစ်ကြာကျွမ်းကျင်သည်။
CNC Milled Precision အစိတ်အပိုင်းများကို Anodizing
စိတ်ကြိုက်စက်မှုတိကျသောသံမဏိ CNC ...
လူမီနီယမ် CNC စက်စက်
အက္ခရာ CNC Milling Remote Control Shell